01 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 1 2013
နောက်ဆုံးမိနစ်: တချို့က Metrobus လက်အောက်တွင် Way ကို Get
အချို့သော Metrobus လေယာဉ်ခရီးစဉ်များစတင်ခဲ့သည် - 1 ၏မေလအတိုင်းအတာအရဖျက်သိမ်းလိုက်သော metrobus ပျံသန်းမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးBeylikdüzü - Topkapıလိုင်းသို့ပုံမှန်ပျံသန်းမှုများစတင်ခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးအစီအမံများအရဖျက်သိမ်းခဲ့သောBeylikdüzü-Topkapıလိုင်းတွင် metrobus ဝန်ဆောင်မှုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစ္စတန်ဘူလ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကကြေငြာခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ယာဉ်အသွားအလာစည်းမျဉ်းထဲမှာBursanın Inonu Caddesi
အတူတူခေတ်ပြိုင်နှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-T1 ဓါတ်ရထားလိုင်းစီမံကိန်းဆောင်ခဲ့ဦးမည်သည့်လမ်း Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့မြို့လယ်ပေါ်bursanın Inonu အသွားအလာစည်းမျဉ်း, ကတည်းကİnönüလမ်း2ကြာသပတေးနေ့, မေလယာယီအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ ပန်းပု - ဂိုဒေါင် [ပို ... ]
ဆောက်လုပ်ရေး site မှ Allegedly Bilecik YHT Cable ကို Theft
Bilecik Osman ခရိုင် Bilecik YHT စွပ်စွဲချက်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေး site မှ cable Theft, အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT)5လူတွေကဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်များကနေကြေးနီဝါယာကြိုးခိုးယူစွပ်စွဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ စွပ်စွဲတစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်သမားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင် site ပေါ်တွင်လျှပ်စစ်မီး, A.Ö. (39) [ပို ... ]
မေလအတွက်မကြာသေးမီအခြေအနေကြောင့် 1 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့metrosüsခေါ်ဆောင် Taksim Metro န်ဆောင်မှု Bremen-Hacıosရပ်တန့်သည့်အစီအမံများ၏နယ်ပယ်အတွင်းကြောင့်မေလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်၏ဝန်မှမေလ၏အဆုံးအားဖြင့်အခြေအနေကို 1 1 ။ Mecideyeköyနောက်ကျောများတွင် Metrobus နှင့်မီထရိုသုံးစွဲဖို့လိုသောနိုင်ငံသားများ။ Kabataş-ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာ Taksim, Taksim Şişhane- [ပို ... ]
Malatyay အဝေးပြေးပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 118 သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို
အဝေးပြေးလမ်းမကြီး Malatya ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 118 89 တထောင်သန်း။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်, သူသည်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအမြင့်ဆုံးထောက်ပံ့ကြေးအဖွဲ့အစည်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အကဲဖြတ်, အဝေးပြေး 2012 ၏အခြေခံပေါ်မှာသည့်အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစရိတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဖွဲ့အစည်းများနှစ်ပေါင်း 8 ။ 118 89 တထောင်သန်း၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ [ပို ... ]
Unkapani တံတားလုံးဝတံခါးပိတ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်လူသွားလူအသွားအလာ။ တံတား၏အလယ်တွင်အပိုင်းထွက်ခွာသွားခွင့်မပြုခဲ့သညျ။ အဆိုပါတားမြစ်ချက်ရှိနေသော်လည်းအစ္စတန်ဘူလ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကမေလနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ 1 များအတွက် Taksim ရင်ပြင်ကိုသွားချင်သောသူတို့အားရဲတပ်ဖွဲ့ကခွင့်ပြုမထားဘူး။ Unkapani တံတား၏မူဘောင်အတွင်းယူဆောင်ရွက်မှုများ [ပို ... ]
ခက်ကတ္တရာ၏တစ်လလျှင် Trabzon မြူနီစီပယ် 1 20 တထောင်
အဆိုပါကတ္တရာရာသီမှ Trabzon မြူနီစီပယ်အမြန် entry ကို။ ကတ္တရာလမ်းကိုဖန်ဆင်းတထောင်တန်ချိန် 31 2013 လအတွင်း, မြှို့နယ်၏သမိုင်းအတွက်ရာသီဖွင့်လှစ်ကြောင်းမတ်လ 1 20 ကတ္တရာ။ အဆိုပါ 2013 150 တထောင်အတွက်ကတ္တရာတန်ချိန်သူတို့ Trabzon ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူထွက်သတ်မှတ်ထားကြောင်းမှတ်ချက်ပြု [ပို ... ]
မီးရထားယခုအခမဲ့တူရကီရထားလမ်းကုမ္ပဏီ TCDD အပေါ်ယူနစ်ခွဲထုတ်လက်ရှိဥပဒေရေးရာ status ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းအတွက်မဆိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ TCDD, ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံအော်ပရေတာနှင့်အတူ "မီးရထားပို့ဆောင်ရေး၏လစ်ဘရယ်အပေါ်တူရကီဥပဒေ" ဟုတရားဝင်ပြန်တမ်းပြဋ္ဌာန်း [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ပျံသန်းမှုအတွက်မအောင်မြင်ဘူး Metrobus နှင့် Ido
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မအောင်မြင်ဘူး Metrobus နှင့် Ido အချိန်: အစ္စတန်ဘူလ်မေလ 1 အတွက်အလုပ်သမားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်နေ့ဒီတော့အချို့သောလမ်းများယာဉ်ကြောမှအပိတ်ခံခဲ့ရသည်။ ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်များအတွက် Metrobus, Ido- နှင့်မြို့လိုင်းများမဖြစ်နိုင်ပါ။ အစ္စတန်ဘူလ်မေလ 1 အတွက်အလုပ်သမားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်နေ့ [ပို ... ]
တူရကီဂူးလ်ဦးအတည်ပြုလိုက် "မီးရထားပို့ဆောင်ရေး၏လစ်ဘရယ်အပေါ်ဥပဒေ" သမ္မတအဗ္ဗဒူလာဂူးလ်, တူရကီ၏မီးရထားပို့ဆောင်ရေးအစိုးရအပေါ်ဥပဒေအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုထွက်ခွာမယ့်မီးရထားနှင့်အတူရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၏အော်ပရေတာများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်အဖြစ်ဥပဒေနှင့်အ TCDD, [ပို ... ]
Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Inonu Caddesi အကြာတွင်ပိတ်ပါမည်
Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, T1 ဓါတ်ရထားလိုင်းစီမံကိန်း, İnönüလမ်းယာယီကြာသပတေးနေ့, မေလ2ကတည်းကအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ အတိုင်းအတာİnönüလမ်းအတွင်းပန်းပု-ဂိုဒေါင်လမ်းရထားလိုင်းကို,2မှာမေလ 07.00 ကြာသပတေးနေ့ထံမှအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
400 ၏နယ်သာလန်သံတမန်ဆက်ဆံရေး - ထို NIH TCDD အထူးရထားနှင့်အတူပူးပေါင်းလာမည့်တူရကီငှါး။ ငါတို့သည်သင်တို့နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပဘို့စီစဉ်နေပါတယ်စီမံကိန်းများအတွက်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အယူအဆကိုဆက်ကပ်။ တက္ကသိုလ်များ, ကျောင်းများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, အသင်းအဖွဲ့များနှင့်ဒါပေါ်မှာ။ အဖွဲ့အစည်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏အကြောင်းကို [ပို ... ]
အဘယ်သူမျှမ output ကို Taksim!
အဘယ်သူမျှမ output ကို Taksim! : အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Taksim ခရိုင်အတွင်းရှိမေလနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပအပေါ် 1 အဓိပ္ပါယ်ပိတ်ပင်မှု။ ပတျဝနျးကငျြလမ်းများပိတ်လိုက်တယ်။ Metrobus, လှေ, မော်တာ, ပင်လယ်ဘတ်စ်ကားဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ တချို့ကမြေအောက်ရထားဘူတာယနေ့ပိတ်လိုက်တယ်။ 1 အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Taksim အတွက်မေလနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပပိတ်ပင်ထား [ပို ... ]
Marmaray Neolithic အလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Marmaray စီမံကိန်းကိုမှန်းဆကြလိမ့်မည်ဟုသူနှစ်ဖက်စည်းလုံးဖို့ရည်မှန်း, သမိုင်း၏စာမကျြနှာအဘို့အကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ကြမည်နည်း ဤနည်းကိုတွေ့ခံရဖို့လူသိများရှေးဟောင်းကမ္ဘာ၏ဆိပ်ကမ်းများတွင်အကြီးဆုံးသင်္ဘောကို, ဒီစီမံကိနျးအတှကျကောက်ယူကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး '' အများပြည်သူ '' ခြေရာ [ပို ... ]
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman အဆိုပါ railwaymen ဖို့ကြွေးကြော်!
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာSüleyman Karaman အဆိုပါ railwaymen ဖို့ကြွေးကြော်! ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအသက်ရှင်ရထားလမ်း 157 နှစ်ပေါင်း၏သမိုင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောရက်။ ငါသည်သင်တို့ကို demiryolc ၏ကြီးမားသောbahtiyarlıkခံစားချက်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကအနည်းဆုံးသလောက်ဖော်ပြစကားကိုနားထောငျသငျနှငျ့အတူအတူတကွအလုပ်လုပ်ပထမဦးဆုံး 10 နှစ်, [ပို ... ]
TCDD ၏Akçagöz - စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ၏ Mills ကမတူကွဲပြားခြင်း Project မှအထွတ်အထိပ် - YDA ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်အနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ
အဆိုပါ Action Plan အောက်တွင်အရှေ့တောင် Anatolia စီမံကိန်း (GAP)6၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်တူရကီပြည်နယ် Demiryo (TCDD) ။ MıntıkaမှAkçagöz၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု - Mills ကမူကွဲဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောအကဲဖြတ်အလုပ်၏နူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်းပြီးစီးပြီ။ [ပို ... ]
Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လိုင်းနောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ခဲ့သည်
Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်ပို့ဆောင်ရေး YHT လိုင်းနောက်ဆုံးအဆင့်သတို့သမီး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim "တူရကီသာခရီးသွားလာအချိန်ကဒီလမ်းကြောင်းတလျှောက်အစ္စတန်ဘူလ်ကြား၌3နာရီသူတို့ခရီးသွားလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားလမ်း၏နိုင်ငံသားများနှင့်အတူသွားသောအလွန်အတိုင်းအတာထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အကြားကဤခရီးသွား [ပို ... ]
ဗန်လမ်းမကြီး Sirnak များ၏အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်
ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, လမ်း Sirnak အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Vahid Ozkan Sirnak-ဗန်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း၏အလောင်းတော်ထားအခြေခံအုတ်မြစ်အတူ။ ဝန်ကြီး Uludere အဆိုပါချီတက်ပွဲမြေပေါ်မှာလာမယ့်လမ်းနှင့်ပူးတှဲပါဗုံအပေါ်ပြုမိ "ဤလမ်းစက်ရုံ 40 ဆိုလို" [ပို ... ]
Izmir hauliers ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများအားဖြင့်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်
မေလနှင့်နည်းပြအလီအယ်လ်အလီ Haydar Erdem,6အတွက်ရွေးကောက်ပွဲများမတိုင်မီစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (Ito) 45 ။ ယောဘသည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသူတို့ကော်မတီထံမှခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သီလ, "ကျနော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆုံးဖြတ်ရန်။ ကျနော်တို့ကဏ္ဍ၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ Çandarlı [ပို ... ]
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Cankurt ပေါ်တွင်အလုပ်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Necmettin Kalkan Artvin, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၏ site ကိုအသက်ကယ်သမားလူနာတင်ယာဉ်မီတာအပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Hopa-Artvin လမ်း 690 မြင့်လမ်းကြောင်း 8 100 တထောင်ပြီးစီးခဲ့သည်ဟု၎င်းကပြောသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shield ကို, အ AA ကိုသတင်းထောက်အားမိမိကြေညာချက်ထဲမှာပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး [ပို ... ]